अनलाइन हर्म्स व्हाइट पेपर - इवार्ड फाउण्डेशन
समाचार ब्लग अनलाइन हर्म्स व्हाइट पेपर
अनलाइन हर्म्स व्हाइट पेपर
कुनै आश्चर्य छैन तर यो अझै कट्टरपन्थी छ !! प्रशंसा को ठूलो दौर
यूके सरकारको लामो प्रतीक्षा अनलाइन हर्म्समा सेतो कागज अन्ततः 8th अप्रिल 2019 मा देखा पर्यो। यदि तपाईं एक छिटो (ish) सिंहावलोकन चाहनुहुन्छ भने, प्रेस विज्ञप्ति गृह कार्यालय हो यहाँ.
यदि तपाइँ त्यस्तो क्षेत्रबाट साँच्चिकै बुझ्ने कोहीबाट प्रतिक्रिया चाहनुहुन्छ भने, यहाँ एक पाहुना ब्लग पोष्ट छ। अग्रणी विशेषज्ञ जोन कार लेख्छन् ...
बच्चाहरू, अभिभावकहरू र अन्य नागरिक समाज संस्थाहरूले यसलाई गम्भीर रूपमा स्वागत गरिरहेको छ। यो किनभने किनभने यो पहिलो दर कागजात हो, यूकेमा इन्टरनेट प्रशासनको नयाँ दृष्टिकोणको सुरुवातको संकेत। यद्यपि, सबैजना जान्दछन् कि यहाँ के हुँदैछ, व्यावहारिक रूपले संसारमा हरेक उदार लोकतान्त्रिकमा समकालीन गूंज छ। त्यहाँ यसको कारण हो।
मेरो शीर्षकहरू यहाँ छन्:
क्षेत्रमा को हो?
ती कम्पनीहरू छन् "दायरामा" के हुन् "प्रयोगकर्ताहरू प्रयोगकर्ताद्वारा उत्पादित सामग्री साझेदारी गर्न वा पत्ता लगाउन वा अनलाइनमा एकसाथ कुराकानी गर्न अनुमति दिनुहोस्।" मलाई लाग्थ्यो त्यो अर्को तरिका हो "सामाजिक संजाल"। तर सम्भावना यो कम्पनीहरू पारंपरिक रूपमा सोशल मिडिया साइटहरू र सेवाहरूको रूपमा सोचेको भन्दा ठूलो हुन सक्छ।
हेरचाहको एक वैधानिक कर्तव्य
व्हाइट पेपरको केन्द्रक घोषित इरादा हो कि कम्पनीहरु लाई आफ्नो प्रयोगकर्ताहरु को सुरक्षा को लागी अधिक जिम्मेदारी ले को लागी नयाँ कानूनी कर्तव्य स्थापित गर्न र सामाग्री या गतिविधिहरु को कारण उनको सेवाहरुमा गतिविधि को सामना गर्न को लागी।
एक स्वतन्त्र नियामक द्वारा लागू गर्न अनुपालन
नयाँ, वैधानिक नियामक स्थापित गरिनेछ। अभ्यासका कोडहरू यो क्लिभिंग कम्पनीहरूको अपेक्षा के बाहिर सेट आउट गर्नेछ। यदि कम्पनीले कोडमा सेट नगर्ने तरिकामा निर्दिष्ट कर्तव्य पूरा गर्न चाहन्छ भने, उनीहरूले नियामकलाई व्याख्या गर्न र औचित्य दिनुपर्दछ कि उनीहरूको वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रभावकारी रूपमा एकै वा बढी स्तरको प्रभावलाई कसरी प्रभाव पार्नेछन्।
एक कम्पनीको सर्तहरू र सर्तहरू नयाँ महत्त्व प्राप्त गर्छन्
सेवाको व्यवसायको शर्तहरू र सर्तहरू सफा र पहुँचयोग्य हुनेछ, बच्चा र अन्य कमजोर प्रयोगकर्ताहरू सहित। यो पहिले नै एक जीडीपीआर आवश्यकता हो जुन व्यवहारको कोडमा अधिक पुरा तरिकाले बाहिर उचित उपयुक्त डिजाईनमा हिज्जे हुने सम्भावना रहेको छ जुन यूकेको गोप्य निकाय (आईओसी) चाँडै हुनेछ (?) प्रकाशित हुनेछ।
थप सामान्यतया, नयाँ नियामकले कसरी प्रभावकारी रूपमा कम्पनीको शर्तहरू र सर्तहरू लागू भइरहेको छ भनेर आकलन गर्नेछ। आफ्नो रिपोर्ट को सूचित गर्न र यसको नियामक कार्य को मार्गदर्शन गर्न को लागि, नियामक को कम्पनीहरु को वार्षिक रिपोर्ट को आवश्यकता को शक्ति हुनेछ।
उचित र आनुपातिक
नियामकले कम्पनीको क्षमतालाई नियन्त्रित आवश्यकताहरु पूरा गर्न खातामा लिनेछ, प्रयोगकर्ताको आधारमा कठोरताको गम्भीरतामा उनीहरूको प्लेटफर्मको पहुँच समेत।
यो आनुपातिक दृष्टिकोण पनि कानूनमा राखिएको छ जुन स्पष्ट हुनेछ कि कम्पनीहरू हुन् उनीहरूको सेवामा हानि हटाउन उचित र आनुपातिक कार्य लिन आवश्यक छ (मेरो जोर)।
नियामकहरूले कुन गतिविधिलाई अवैध क्रियाकलापको सामना गर्न र बच्चाहरूलाई अनलाइन सुरक्षित राख्न कुन स्पष्ट आशाहरू सेट गर्नेछ।
प्लेटफर्मको प्रतिरक्षाको सिद्धान्त त्याग्न कुनै इरादा छैन तर
"नयाँ नियामक फ्रेमवर्क (ले जाएगा) एक अधिक पूर्ण दृष्टिकोण (बढ्दै) जिम्मेवारी कि सेवा अनलाइन हानि को सम्बन्ध मा"
म आशा गर्दछु कि यसले फोटोडब्ल्यू एल्गोरिदमको तैनाती को एक ठूलो स्तरको नेतृत्व गर्नेछ जुन पाईफोफिलिक र अन्य हानिकारक व्यवहार जस्ता दुर्व्यवहारको पत्ता लगाउन सक्छ।
पहिले समय छैन।
नामकरण गर्दै, शंकालु र पारदर्शिता
नियामकले कम्पनीसँग जानकारी प्रदान गर्न आवश्यक पर्ने पर्याप्त शक्ति पाउनेछ। पारदर्शिता नयाँ शासनको प्रमुख भाग हुनु हो। जो कम्पनीहरु स्न अप गर्न सार्वजनिक रूपमा पहिचान गरिनेछ।
जरिवाना, अवरुद्ध र आपराधिक जिम्मेवारी
नियामकले उपकरणको अन्डोपिन र समर्थन गर्ने एक दायरा रहेको छ जसमा पर्याप्त जरिवानाहरु लाई सम्भावना सहित क्षमताको समर्थन गर्दछ, सम्भवतः साइटहरु वा सेवाहरू ब्लक गर्न आवश्यक पर्दछ। वरिष्ठ कार्यकारीहरू आपराधिक रूपमा विफलताका लागि उत्तरदायी गर्न कार्डहरूमा पनि छ।
सेतो हरित साथ टिंग
यो भनिएको छ कि सेतो पेपर धेरै हरीको साथ टिंग भएको छ। यसको अर्थ त्यहाँ काम गर्न धेरै महत्त्वपूर्ण विवरणहरू छन्। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण दुई को नियामक को पहिचान र शक्ति हुन् र यो कसरी वित्त पोषित हुन्छ।
को लागि खेल्न धेरै
त्यहाँ तीन महिनाको औपचारिक परामर्शको अवधि हो तर त्यहाँ यो मुद्दाले हामीलाई भन्दा टाढा चिन्ता हुनेछ कि केही संदेह हुन सक्छ। कानून आवश्यक हुनेछ। ब्रेक्सिट अप्ठ्यारो, कि शायद नै नै केहि कुरा हो जुन छिटो हुन सक्छ।
अर्को साहसी प्रयोग तर यो व्यापक समर्थन छ
निस्सन्देह महत्त्वपूर्ण विवरणहरूमा तर्क हुनेछ। तथापि, सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरू व्हाइट पेपरमा मुख्य बिन्दुहरूको सम्बन्धमा व्यापक रूपमा सम्बद्ध छन्। यो कारणले गर्दा सार्वजनिक राय यो प्रकारका उपायहरू पछि ठोस छ। त्यहाँका विचारधाराहरू अझै पनि सोच्नेछन् जो सरकार र परामर्शहरू यस्ता प्रकारका विषयहरूबाट अलग रहन्छन्। तर जब मार्क जुकरबर्ग पनि वैधानिक नियमनका लागि बोलाइरहेको छ मलाई शक छ कि यस्ता उग्रवादीहरूले कुनै पनि गम्भीर कर्षण पाउनेछन्।
अन्तिम अवकाश सैलूनका ढोकाहरू निलम्बन र छापिएका छन्।
यो ब्लग मूलतः पोस्ट गरिएको थियो अप्रिल 8, 2019 by जॉन कार्र। यदि तपाईं जॉनबाट होस्ट गरिएका अन्य ब्लगहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने, यहाँ तिनीहरू हुन्।
यूके अस्पष्टता कानून
केवल वयस्कों: ब्रिटेनका बच्चाहरु बाट अनलाइन पोर्नोग्राफी राख्ने युद्ध